TIfaaftiraha BBC ee Shiinaha oo isu casishay muranka sinaan la'aanta mushaarka - BBC News Somali
TIfaaftiraha BBC ee Shiinaha oo isu casishay muranka sinaan la'aanta mushaarka
8 Jannaayo 2018
Tifaaf tiraha Shiinaha ee BBC Carrie Gracie ayaa shaqadii iska casishay, iyadoo sababtana ku sheegtay sinaan la'aanta mushaarka ee ragga ay wada shaqeeyaan.
Gracie oo BBC-da ka soo shaqaysay in kabadan 30 sano ayaa qortay waraaq furan oo ay shirkadda ku dhaliilayso kuna sheegtay in ay leedahay "nidaam mushaar bixin oo qarsoodi ah sharcigana aan waafaqsanayn".
Waxay sheegtay in BBC-du ay wajahayso " xaalad degdeg ah oo dhanka aaminaadda ah" ka dib markii ay shaacisay in saddex meeloodoow labo ka mid ah xidigaha qaata in kabadan 150,000 gini in ay rag yihiin.
BBC-da ayaa sheegtay in aysan jirin "hab faquuq ah oo ka dhan ah dumarka".
Gracie waxay sheegtay in ay toddobaadkii hore ka dagtay xilkii tifaaftirenimada ee xafiiska Beijing, balse ay sii joogi doonto BBC-da.
Waxay sheegtay in ay dib ugu noqon doonto shaqadii ay xilkaas ka hor haysay ee dhanka TV-ga halkaas oo ay ka rajaynayso in laga siin doono mushahaar u dhigma kuwa ragga la siiyo.
Deeqa Nuux oo ku guulaysatay abaalmarinta gabayada ee BBC Soomaali
Warqadan oo ay soo dhigtay bar ay iyadu leedahay ayay ku sheegtay in dadka canshuur bixiyeyaasha ah ay leeyihii BBC-da.
Gabadhan ayaa arrimaha Shiinaha ku takhasustay waxay si fiican ugu hadashaa afka Shiinaha looga hadlo ee Mandarin.
"Waxaan rumaysanahay xaq baad u leedihiin in aad ogaataan in sinaanshaha la baalmarayo, iyo in aad ka biyo diidaan oo culays saartaan sidii loo heli lahaa qaab mushaarka loo bixiyo oo siman islamarkaasna daahfuran ".
Bishii Juunyo ee sannadkii hore ayay ahayd markii BBC-da lagu qabsay in ay shaaciso dhammaan shaqaalaha uu mushaarkoodu ka sarreeyo £150,000 sannadkii.
Gracie ayaa sheegtay in ay ka niyad jabtay markii ay ogaatay labo dumar ah oo tifaaftireyaal caalami ah ay ka mushahaar yar yihiin ugu yaraan 50% labo rag ah oo ay isku darajo yihiin.
Akadeemiyada BBC oo billowday macluumaad loogu talagalay suxufiyiinta
BBC oo shaacisay liiska dadka ugu mushaarka badan
Jon Sopel oo tifaaftire ka ah xafiiska BBC-da ee Maraykanka ayaa sannadkii qaata inta u dhaxaysa £200,000-£249,999, tifaafriraha bariga dhexe ayaa isna qaata inta u dhaxaysa 150,000-£199,999.
Gracie ayaan liiskaas lagu soo darin marka waxay ka dhigan tahay in mushaarkeedu uu ka yaraa £150,000.
Intaas ka dibna waraaq ay wada jir u sixiixeen Gracie iyo Katya Adler oo tifaaftire ka ah Yurub oo lagu daabacay Telegraph ayay ku dalbadeen in la siiiyo mushahaar la siman kuwa ay qaataan ragga ay isku darajada yihiin.